Sam Mendes n'afọ 1917
Mbido Nhazi Ihe Nkiri
Vintage Silent ụlọ
Skylọ Nsọ Sky Otu
Industrylọ Ọrụ Ese
Sssh! Na-esegharị na Ọganiihu
Sam Mendes World War 1 Drama '1917'
Silent Roof Mechanized nrụnye
Setme Nhazi Ihe Nkiri
Nwelite na Sam Mendes - 1917
Ulo-elu - Sky One Production
Filmlọ Ọrụ Ihe Nkiri & Silent Roof
Oke mkpọtụ mmiri si n’elu ụlọ ihe nkiri gị ọ bụ nsogbu?
Oke mkpọtụ ọ na - emebi usoro igba egbe gị?
Silent Roof nwere azịza nye nsogbu gị.
Ihe a na-etinyeghị aka na ya n’elu ụlọ ahụ ga-akwụsị nkwụsị mkpọtụ mmiri.
Biko detuo Blog a ka ị na-emelite oge niile.
Sssh! Filming Na-aga n'ihu
Ezigara ya na 23 Septemba 2018
E nyeburu ụlọ ‘Monster Building’ mbụ na Southall, Ealing, London, enye ọhụụ mgbazinye ndụ maka ụlọ ọrụ ihe nkiri na Britain na teknụzụ Mbelata mkpọtụ mkpọtụ Silent Roof.
Ebe a na-emepụta ihe, nke mepụtara mkpụrụ akụ tinyere ọka a ma ama 'Honey Monster' Sugar Puffs ruo 2016, ka etinyere ya wee rue mgbe ọ chọpụtara na nso nso a site na ụlọ ọrụ scout, Nnakọta Ọnọdụ. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na anyị nwere ọ dịla ezigbo ụtọ oge ọkọchị n'ime iri afọ, Mpaghara Mkpokọta maara na ụzụ mmiri ozuzo nke ihu igwe ọdịnala Britain adịghị agwakọta nke ọma na ihe nkiri ụlọ dị elu amịpụtara, n'ihi na downtime bụ ihe dị oke egwu na mmefu ego ha. N'ịchọ na ntanetị maka ọgwụgwọ maka nsogbu ha, ha chọpụtara naanị ngwaahịa arụnyere na mpụga nke na-ebelata mkpọtụ mmiri n'ụzọ dị egwu, tupu ịpịa elu ụlọ. Ha tinyere enyemaka site na enyemaka nke Silent Roof Ltd, onye rụrụ ọrụ nrụnye n’elu ụlọ arụmọrụ nke 5,400 square mita nke ụlọ ọrụ ahụ. Ugbu a nrụnye ahụ ka emechara ugbu a, a na-atụgharịkwa nnukwu anụ ụlọ ka ọ bụrụ ihe nkiri ebe a na-akwadebe mmemme izizi. A ga-enweta televishọn a ka oge ụfọdụ gafere site na Sky Atlantic.
Ezitere 10 February 2019
Egwuregwu Samwa Ọhụrụ Sam Mendes ọhụrụ 'ihe nkiri' 1917 'nke Storyworks Productions ahọpụtala Silent Roof Ltd iji nye teknụzụ Mbelata Ntugharị Rain Noise gaa na ebe a na-ekenye fim.
Usoro Silent Roof ga - echebe ụlọ a na - enwe nchekasị nke mkpọtụ mmiri nke na - esite n'uko ụlọ na mgbidi nke ihe owuwu ahụ. Mendes, onye meriri emeri iteghete maka agụmakwụkwọ maka fim gụnyere American Mma, Skyfall, na Specter, ekwenyela na aka ya na fim mbụ World War, 1917, nke ga-ebido imepụta vootu na opupu 2019 na ebumnuche maka ụbọchị mwepụta nke Disemba 2019.
Ugwu Akwụghị Ego
Nwụnye nke mebere
Ezigara ya na 24 March 2019
Silent Roof rụziri nrụnye na Airlọ Ọrụ Egwuregwu Ikuku International na UK.
Ojiji anyi ndi ozo anyi Ihe nkiri Fim iji nye ndi oru, ulo kpuchie elu ya n’otu ubochi.
Oge nkwụsịtụ mkpọtụ mmiri bụ ihe a na-eme n'oge gara aga n'ihi Silent Roof.
Ezigara na 6 Eprel 2019
Silent Roof Ltd na-eji ụzọ nrụnye arụ ọrụ iji wụnye Silent Roof Rain Noise Mbelata Teknụzụ gaa n'ọba abụọ. A ga-ewu ihe nkiri Banyere n’ime barn dị ka akụkụ nke ihe ọhụrụ Sam Mendes mmepụta ‘1917’
Maka ihe ngosi a dị egwu, A họpụtara Silent Roof ka ọ wepụta ihe ga-eme ka mkpọtụ mmiri dị oke elu nke ụlọ ọrụ profaịlụ nke ụlọ barns rụpụta. N'okwu a, ụlọ kpuchie ya na Silent Roof Ihe na-echebe ihe nkiri Nkịtị site na nkwụsịtụ mkpọtụ mmiri.
Ntị bụ nkwenye
Ezigara na 18 July 2019
Vidiyo dị n'aka nri na-egosi ngosipụta Silent Roof n'oge nke ngwaahịa anyị pụrụ iche. Trarụ ọrụ anyị na-abụ otu dị ka ọ dị laa azụ n'oge 2000s… Ntị bụ nkwenye
Pịa bọtịnụ eji egwu ma jide n'aka na olu dị na ngwaọrụ gị etolitere.
N'oge a (2007), ụdị Silent Roof Ihe (SRM) bụ nsụgharị translucent, ihu ọma na agba. Ejiri nke a tinye n'ọrụ n'elu ụlọ nchekwa ụlọ na UK niile. Silent Roof Ltd ugbu a na-etinye uche na ọ bụ mmemme na mpaghara azụmaahịa ebe a na-eji otu ojii ojii nke SRM.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ụzụ mmiri metụtara ụlọ elu siri ike, kpọtụrụ anyị (ala peeji) na Silent Roof, anyị nwere ike idozi nsogbu gị.
Mmelite na Sam Mendes Production 1917
Ezigara ya na 8 August 2019
A họpụtara Silent Roof Ltd ka ọ nye teknụzụ Mbelata Ntugharị Mmiri ozuzo ya na ebe a na-enyocha ihe nkiri mbụ World War Epic '1917'. A rụchara vidio ahụ n'ime ụlọ abụọ echedoro na ngwụsị oge opupu ihe ubi nke afọ a 2019.
George MacKay na Egwuregwu nke Ocheeze 'Dean-Charles Chapman kpakpando na 1917 dị ka ndị agha abụọ na-eto eto nke Britain nyere ọrụ ịgafe na mpaghara ndị iro iji ziga ozi nke ga-akwụsị igbu ọtụtụ narị ndị agha, otu n'ime ha bụ nwanne nwoke maka agwa Chapman, Blake. N'akụkụ MacKay na Chapman na fim ahụ bụ Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, Andrew Scott, Mark Strong, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Justin Edwards, Gerran Howell, Anson Boon, na Richard McCabe.
A malitere 1917 na USA na Disemba 25, tupu mwepụta zuru ụwa ọnụ na Jenụwarị 10, 2020.
Silent Roof nọ na usoro iweta onye isi ọzọ na ụlọ ọrụ ihe nkiri maka nrụnye ọzọ dị egwu, ka emesịa.
Silent Roof - ratingrụ Ọrụ na
ndabere na Sky Otu Production
Ihe na 23 Septemba 2019
Silent Roof Material (SRM), na --eme ka mkpọtụ mmiri na - agbachapụ mkpọtụ maka ịsegharị 'Temple' ọhụrụ Sky Original na Sky One. N’ọnwa Septemba afọ 2018, a na-ewere ọnọdụ onyonyo a maara n’ime mpaghara dịka ụlọ ‘Monster’ na Southall London maka ịsegharị usoro ihe nkiri a nke Skykyrien nke Norwegian, nke izizi ya n’afọ 2017. Ọ bụ kpakpando Mark Strong, Carice Van Houten, na Daniel Mays ma nyefee ya ọrụ na 23 Ọgọst 2018. Eluigwe ụlọ ahụ ebe agbagburu usoro ụfọdụ, SRM kpuchitere ụda ndekọ nke mmepụta site na nkwụsịtụ mkpọtụ mmiri na nsonaazụ ọzọ akwụ ụgwọ metụtara ijigharị.
Daniel Milton (Mark Strong) bụ onye dọkịta na-awa ahụ, nke ọdachi dakwasịrị ya, na-arụ ụlọ ọgwụ na-ezighi ezi n'okporo ụzọ ụlọ mposi Templelọ Nsọ dị na London maka ndị chọrọ ịnọ n'èzí sistemụ, ma ọ bụ maka ndị nwere oke agụụ ịchọ ọgwụgwọ enweghị ya site na iji usoro ọgwụgwọ. N'enyemaka nke onye ọrụ nzuzo dị n'okpuru ala Lee (Daniel Mays) na onye nyocha ahụike na-echegbu onwe ya Anna (Carice van Houten), ndị ọrụ mmekọrịta ya dị egwu na-atụghị anya Daniel nwalere omume ya ruo na njedebe. Mana ọ bụrụ na ọ ga - echebe onye ọ hụrụ n'anya, ọ ga-aba uru.
Kpọtụrụ anyị Ebe a
Ekwentị: 01803 203445
Ekwentị: 07786 576659
(c) Ikike niile echekwabara 2007 - 2020 Silent Roof Ltd.
Kwadoro site na EMF Ụdị Ochie
Daalụ maka ịdenye aha. Kekọrịta njikọ ntinye pụrụ iche gị iji nweta ihe iji merie ihe nrite ..